के तपाईको नङमा यस्तो आकृति छ ? त्यसो भए के हुन्छ ? जानी राखौँ – Etajakhabar
के तपाईको नङमा यस्तो आकृति छ ? त्यसो भए के हुन्छ ? जानी राखौँ
ताजा खबर :- हुन त, तपाईको शरीरको हरेक अंगको आफ्नो खास महत्‍व हुन्छ। सबै अंगले हामीलाई फिट एण्ड फाइन राख्नको लागि एकदमै आवश्यक छन् । तिनै अंगहरुमा एक तपाईको हात पनि हो। धेरै कामहरु गर्नको लागि यसको हाम्रो शरीरको ठूलो महत्व र भूमिका रहन्छ। तर के तपाइँलाई थाहा छ तपाईको हातले, तपाईको बारेमा धेरै कुराहरु बताउछ। उदाहरणको लागि तपाईको हातका यी रेखाहरुले तपाइको भविश्य बताउँछ। तपाईको औँलाहरुले तपाईको यक्‍ितत्‍वलाई परिभाषित गर्ने गर्छन। यसको अलावा एउटा खास चीज तपाईको हातमा हुन्छ, जुसले तपाईको बारे थुप्रै कुराहरु बताउछ। ति सब कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने तल हेर्नुहोस।
आधा चन्द्र नङको महत्वपूर्ण भाग…
नङको तलको भागमा आधा चन्द्रमा जस्तो बनेको हुन्छ, जुन नङको बाँकि भाग भन्दा धेरै सेतो हुने गर्छ। के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको थियो, आखिर यो आधा चन्द्र किन बनेको हुन्छ ? वास्तविकतमा यो आधा चन्द्र भएको नङको हिस्सा अहम हो। यस आधा चन्द्रवाला भागलाई ल्याटिन भाषामा “Lunula” भनिन्छ । यो Lunula सिर्फ डिजाइन मात्र हैन , Lunula तपाईको स्वास्थ्यको विषयमा पनि धेरै राज खोल्नमा सहयोगी रहन्छ।
चीनको पारम्परिक स्वास्थ्य समुदायका अनुसार Lunula कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यको मापदण्ड हुने गर्छ। यो आधा चन्द्रको स्थिति तपाईको स्वास्थ्यको बेरोमिटर हो । तपाई जब पुर्ण रूपले स्वस्थ हुनु हुन्दैन भने Lunula तपाइको नङबाट गायव हुने गर्छ। तर, यदि कम देखिएमा त्यो व्यक्ति रोगी रहेको बुझिन्छ । यस्ता व्यक्ति शारीरिक रुपले कमजोर हुने र उसको पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ ।
अर्ध चन्द्रले के भन्छ तपाईको स्वस्थ्यको बारेमा ?
१. सामान्य अर्ध चन्द्रमा (Lunula)
यदि तपाईका १० औंलाहरुका नङ मध्य ८ औँलाहरुको नङहरुमा गडा सेतो रंगको अर्ध चन्द्रमा बनेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य निकै राम्रो भएको बुझ्नुस्। यस्तो अवास्थामा तपाईले आफ्नो स्वस्थ्यको कुनै चिन्ता गर्नु पर्ने देखिन्दैन।
२. कम हुँदै गयो भने अर्ध चन्द्रमा के हुन्छ ? (Lunula)
तपाईको औंलाहरुको नङहरुमा यदि अर्ध चन्द्रमा गायब हुँदै गैरहेको छ र यो सिर्फ बुढी औंलामा मात्र अर्ध चन्द्रमा बाँकि रह्यो भने, तपाइँ आफ्नो स्वास्थ्य प्रति धेरै सजक हुन जरुरी रहन्छ। तथा यस्तो अवस्थामा तपाईको स्वस्थ्य अवस्था छिट्टै कमजोर हुने र बिमारी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्ता व्यक्ति शारीरिक रुपले कमजोर हुने र उसको पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार यो अर्ध चन्द्रमाले शरीरसंग जोडिएका कैयौं प्रकार अन्य कुराहरुमा इशारा गर्छ। यसको साथै अर्ध चन्द्रमा गायब हुनुले तपाइको शरीरमा फलाम (आइरन) को कमी, थाईराएड एवं अन्य बिमारिहरु हुन सक्छ।
यसकारण अर्ध चन्द्रमामा लगातार नजर राख्न जरुरी छ। किनकी यो तपाईको स्वास्थ्यको सुचक हो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ०५, २०७४ समय: ०:२१:२३